आदित्यले विवाहपछि श्रीमती श्वेतालाई दिए धम्की ! « Bagmati Page
आदित्यले विवाहपछि श्रीमती श्वेतालाई दिए धम्की !
काठमाडौँ । निरञ्जन राज भेटवाल र सुनिल पाण्डेले निर्देशन गरेका फिल्म विश्व प्रतिष्ठित रोट्रेड्याम फिल्म
संसारमा सुन्दरताको पारखी को पो नहोला र ? अनुहार तथा जीउडालको सुन्दरता बढाउनका लागि अनेक
आयुष र एलिनाको “नतड्पाउन”
काठमाडौँ । गायक आयुष अर्याल र गायीका एलिना चौहानको स्वरमा रहेको नयाँ गीत भिडियो सार्वजनिक